Cottage cheese uye almond cake (gluten-isina) - Recipe | Recipe
Cottage cheese uye almond cake (gluten-isina)
Alicia tomero | 30/11/2021 22:37 | Kudya kwemangwanani uye Zvikafu, Recipes, Gluten Mahara Mapoka
Iwe uchada keke iri sezvo iri resipi rakagadzirwa nenyoro kottage cheese uye pasi maarmonds. Iyi resipi yakanakira vanhu Gluten isingashiviriri. Iwe uchaona maitiro aungaita iyi fluffy keke nemoyo murefu uye nekureruka kukuru. Iwe unofanirwa kutevera nhanho zvakadzama kuitira kuti iwe uwane iyi yakanaka dessert.
Kana iwe uchida rudzi urwu rwemhando yekubika fluffy, unogona kuedza kugadzira yedu keke reorange newalnut uye chokoreti.
Nguva yekugadzirira: 80 M
Nguva yakazara: Maawa makumi matatu 2 m
125 g nyoro ruomba
300 g yekottage chizi
50 g hupfu hwecornstarch
190 g yamaarumondi epasi
4 mazai saizi L
Zvipuni zviviri zvevanilla yakabviswa
Maoko maviri emaarumondi akachekwa
Mahwendefa maviri eshuga yeupfu
Tinoisa iyo mafuta uye shuga. Nemusanganisi wemaoko uye netsvimbo tinosanganisa kusvikira zvigadzirwa zvabatanidzwa.
Isu tinoparadzanisa machena uye majoka. Isu tinowedzera bhotela uye shuga, vanilla extract uye iyo mazai evha imwe panguva, uye isu tiri kusanganisa ne blender yedu. Zvadaro tinowedzera vanilla extract uye ramba uchisanganisa.
Tinowedzera hupfu maamanda noupfu hwechibage tikarova.
Isu tinowedzera iyo curd uye tinomutsa. Tinorega zvigadzirwa zvibatanidze zvakanaka.
Mundiro tinoisa iyo zvakajeka uye netsvimbo dzakachena tinodzirova kusvikira dzaita padhuze nechando.
Tinowedzera vachena Kumusanganiswa wekare uye ne spatula tinoikurudzira zvishoma nezvishoma uye nekufambisa mafambiro kuitira kuti ivhu remusanganiswa rirege kudonha.
Isu tinogadzirira a denderedzwa muforoma iyo inogona kuve isina kuumbwa uye inogona kuenda kuchoto. Inogona kunge yakapoteredza 20cm dhayamita uye silicone. Pazasi peforoma ndakaisa chidimbu chebepa rekubikisa kuti ndikwanise kusunungura keke zviri nani pakupera kwayo. Tinodurura musanganiswa uye tinyoro pamusoro payo zvakanaka. Tinoisa iyo tsama mbiri dzamaamanda pamusoro. Tinoisa muchoto kuti 175 ° kwemaminitsi makumi matanhatu, nekupisa kumusoro uye pasi uye pakati. Sezvo yakabikwa, inofanira kucherechedzwa kuti maamondi haana kubikwa zvakanyanya. Kana zvakadaro, tinogona kuisa chidimbu chealuminium foil inenge hafu yenguva yekubika kusvika pakuguma.
Kana yabikwa tinoirega ichitonhorera uye kushumira nayo shuga yehupfu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudzokorora » Recipes » Cottage cheese uye almond cake (gluten-isina)
Very nyore Kisimusi nyeredzi
Lasagna nenyama uye howa